Maninona ireo Zokiolona Ao Singapore No Mbola Manangona Baoritra Ihany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2015 6:08 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, русский, 繁體中文, Español, English
Ny Minisitra Tan Chuan-Jin mitafa amin'ny zokiolona iray 80 taona, mpanangona baoritra. Sary nifampizaràna be avy amin'ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook-n'ingahy Minisitra.
Tao anatin'ny tapa-bolana, lasa lohahevitra malaza be tao Singapore ny momba ireo zokiolona mpanangona baoritra, taorian'ny tafa nataon'ny governemanta teny an'arabe sy nanaovany famintinana hoe raha ny marina dia manao fotsiny ny asa fanangonana baoritra mba ho fampiasana vatana ireo zokiolona hiadiana amin'ireo olana ara-toekarena samihafa.
Niaraka taminà tanora mpirotsaka an-tsitrapo vitsivitsy, niresaka tamin'ny sasantsasany tamin'ireo zokiolona mpanangona baoritra i Tan Chuan-Jin, minisitry ny Fampivoarana Sosialy sy ny Fianakaviana, tapa-bolana lasa izay ary nampakatra ny fomba fijeriny tao amin'ny Facebook. Taorian'ny niampangan'ny olona maro an'ilay minisitra ho manamaivana ny olan'ny fahantràna eo amin'ny firenena, niparitaka be ilay tantara.
Fa inona no nosoratan'i Tan Chuan-Jin ka niteraka ny fanakianana mivaivay marobe natao azy? Voalohany, nasehony ny fisalasalàny hoe misedra olana ara-bola ireo mpanangona baoritra :
Tsy marina loatra ny fijery mahazatra hoe ireo rehetra manangona baoritra dia olona tsy mahavita miahy tena ara-bola.
Faharoa, nofaritany ho endrika fampiasàna vatana ny fanangonana baoritra:
Ny sasany misafidy ny hahazo vola fanampiny, manao izany ho toy ny endrika fihetsiketsehana sy fampiasàna vatana fa tsy te-hihiboka any an-trano. Manao izany mba tsy hainkinan-doha ry zareo, amin'izay mba manana ny hajany sy tsy mila vonjy amin'ny fianakaviany.
Ary fahatelo, nambarany fa betsaka ny olona no diso fijery momba ireo zokiolona manangona baoritra ireo :
Matetika mihitsy, mitsaratsara foana tsy mandinika tsara ny tena olana ny olona, amin'ity ohatra ity, dia ny fitsaratsaram-poana manodidina ireo mpanangona baoritra.
Ny ankabezan'ireo fanehoankevitra tety anaty media sosialy dia fanakianana ny fomba fijerin'ilay minisitra ny antony ilàn'ireo zokiolona mitety ny arabe hàka ireo baoritra efa niasa, ary maro tamin'izy ireny no niampanga ilay minisitra ho lavitra sy tsy mahalàla ny tena zava-misy. Daniel PS Goh, mpahay fiarahamonina, dia nanipika ny hadisoan'ireo manampahefana tamin'ny “fanehoana ny marina tsy nasiana fijerena lalina sy fametrahana izany ho ao anatin'ny vanim-potoanany.”
Maro amin'ireo zokiolona no toa manangona baoritra satria mba te-hanao fampiasàna vatana ry zareo, maniry fizakàntena ARY amin'izay mba afaka ny ho velona. Ny hoe manangona baoritra ireo zokiolona satria mikatsaka fampiasàna vatana dia tsy midika mihitsy hoe tsy ny fahantràna no nanosika azy ireo ho amin'izany.
Ariffin Sha, izay niaina ny fanohanana ireo mpanangona baoritra tamin'ny alàlan'ny “Happy People Helping People Foundation”, nampahatsiahy an'ingahy minisitra fa tsy asa ara-bàtana mahafinaritra ho an'ireo zokiolona akory izany manangona baoritra izany:
Ho an'ny maro, tsy atao ‘ho fahafinaretana’ ny mitady an'io ambany hainandro migaina sady manosika enta-mavesatra, na “fampiasàna vatana mandritry ny fotoana mampahalalaka”. Raha mba nomena safidy tsy hanangona baoritra ary hipetraka hanao asa any an-toeran-kafa any izy ireny, maro no tsy hisalasala handray izany safidy izany.
Mohammed Nafiz Kamarudin, avy amin'ny “Happy People Helping People Foundation” ihany koa, dia manantena fa ilay raharaha dia hiteraka fahatsiarovantena bebe kokoa momba ny fisian'ny fahantràna ao Singapore , firenena iray amin'ireo manankarena indrindra eto an-tany :
Heveriko fa zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra fa Singapore dia tsy araka izay mahazatra anehoan'ny media azy amintsika akory, ho tena avo lenta sy manaitaitra. Heverintsika fa manankarena i Singapore ary tsy misy mahantra na iray aza, saingy raha toa ianao midina amin'ireny faritra ireny dia hahita fa zara raha mahazo vola ampy mba hihinanany iray lovia ny olona sasany.
Noho ilay lahatsoratra niparitaka be, maro no lasa liana te-hahafantatra bebe kokoa momba ireo mpanangona baoritra ao amin'ny firenena. Tsy faly amin'ilay fahalinana aminy ny sasany amin'ireo mpanangona, raha ny hafa indray manoritsoritra aty anaty aterineto ny fombam-piainany manokana.
Tan Loy Chai, 65 taona, mpanangona baoritra, mitantara ny zava-tsarotra iainana amin'ny fanangonana baoritra :
Eo amin'ny manodidina ny amin'ny iraika ambinifolo na misasakalina aho no afaka mandeha mivoaka, mandra-piposaky ny maraina vaovao. Na amin'izao fotoana izao aza, tsy mbola natory aho. Ny tolakandro, mety misy [baoritra] eny an-toerana saingy tsy mbola azonay alaina aloha, noho izany dia matory izahay ny tolakandro.
Notaterina fa afaka ahazoana 10 cents eo ho eo ny kilao iray amin'ny baoritra efa niasa ary ny mpanangona tsirairay dia mahazo eo amin'ny 4-5 dolara Singapore (manodidina ny 3 USD) isanandro.
Somary tsy faly ihany ny “Youth Corps Singapore”, izay tompondandraikitra tamin'ilay tafatafa nataon'ilay minisitra niteraka resabe, hoe efa maro sahady no nandà ny maha-mitombina ilay tetikasa. Ekeny ny fisian'ny fetran'ny fandraisany andraikitra, saingy nanentana ny rehetra ilay vondrona mba tsy hinia tsy hahalàla ireo fanavaozana kely izay afaka hanamaivana ny fijalian'ireo mpanangona baoritra. Nanoratra tao amin'ny Facebook i Cheng Jun Koh, mpitarika ilay tetikasa hoe :
Antenainay fa tsy noho ny kotaba ateraky ny resabe sy ny fiampangàna ho atosiky ny politika dia ho asitrika any ambany famafàn-kiraro ny fikarohana nataonay, toy ny tsy tokony hamafàna fotsiny ity olan'ny mpanangona baoritra ity ho tsy misy dikany, fa ho iray manainga fanahy hanao fanadihadiana lalindalina kokoa ho an'izay ankolafy hafa liana. Antenainay mba ho maro kokoa no hahazo fandrisihana handray anjara amin'ny fijerena fomba hanampiana ary tsy hovoasakan'ny fanapempoana.
Tsy saribakoly politika izahay ka ho azo hetsiketsehana noho ny antony hafa ankoatra izay faniriana marina hanasoa ny fiarahamonina.
Notsipihan'ilay mpitarika ny tanora fa ny tanjona fototr'ilay tetikasa dia ny hamaly fanontaniana roa farafahakeliny:
Nahoana no mbola misy mpanangona baoritra ato anatin'ny firenentsika izay voalohany erantany? Iza ireny olona ireny, izay miasa mafy ao anaty toetrandro tsy misy indrafo eny amin'ny manodidina antsika eny?
Ny zavatra iainan'ireo mpanangona baoritra dia manasongadina ny fisian'ny tsy fitoviana raiki-tapisaka sy fahantràna lalina ao anatin'ny Firenena iray Voalohany eto an-tany tahaka an'i Singapore. Toa mbola hanohy handrehitra ireo adihevitry ny daholobe ilay olana, satria amin'ny 9 Aogositra, miomana hankalaza ny faha-50 taona nahazoany fahaleovantena tamin'i Malezia i Singapore .